Inona no azonao ambara amiko momba ny SEO iray ho an'ny orinasa tomponandraikitra fitantanana trano?
Ireo andro ireo, ny SEO dia tena zava-dehibe amin'ny karazan'ny orinasa an-tserasera, ary ny fikambanana iray fitantanana ny tranokala an-tserasera dia tsy fahita firy. Raha te hampitombo ny orinasanao fitantanana trano ianao, dia asaina manasongadina ny SEO ao amin'ny tetik'ady ara-barotra nomerika ianao.
Ao amin'ny Semalt, isika dia miasa mandrakariva amin'ny hevitra ara-tsakafo maromaro kokoa ho an'ny orinasan'ny fitantanana trano. Androany, handeha izahay hizara ny fomba mahomby indrindra amin'ny fanatsarana ny SEO. Ireo fanoloran-kevitra ireo dia hanampy anao hampivadika ireo mpitsidika ao amin'ny tranokala ho fitarihana mafy.
Mitandrema amin'ny mombamomba ny sakafo
Ny zavatra voalohany te hiresahana dia ny fanolorana pejy ianao na amin'ny teny hafa ny mombamomba ny tranokala - vukajlovic auto gradiska info. Tadidio fa mila madio sy mazava izy ireo. Ny fomba tsara indrindra handaminana ny fanolorana ny pejy eo anoloanao dia ny hanasaraka azy ho ao amin'ny sehatra fanalahidy efatra. Ireo manam-pahaizana momba ny seminera dia manome toro-hevitra ny hametrahana ireto manaraka ireto eo amin'ny pejy voalohany:
Fanomezan-dàlana hividy trano;
Tale fitantanana fananana.
Ny tanjona voalohany dia ny fanatsarana ny fifamoivoizanao amin'ny fampihenana ny taham-pitenenana sy ny fampitomboana ny fotoana lanin'ny tananao. Tokony ho fantatrao fa misy olona am-polony mitsidika ny tranokalanao isan'andro. Tian'izy ireo ho mahafinaritra sy mora hivezivezy izany. Izany no antony maha-zava-dehibe ny manome torolàlana mora ampiasaina. Tadidio fa raha mandefa ny mpisera tsirairay amin'ny faritra ilainy ao amin'ny tranonkala ianao, dia misy ny mety hitranga kokoa fa handany fotoana bebe kokoa izy ireo fa tsy handao ny loharanonao.
Raha te hampiditra fitaovana hafa ianao, toy ny fifandraisana amin'ny mediam-bahoaka, izany dia tsara. Ny hany zavatra tadidinao: miezaha hitazona ireo zavatra ireo amin'ny sub-menus hafa ao amin'ny tranokalanao. Araka ny voalazanay etsy ambony, ny pejy anoloanao dia tokony ho madio sy mora hivezivezy, araka izay azo atao.
Fanamafisana ny URL ao amin'ny URL
Fanapahan-kevitra lehibe ho an'ny tranonkala rehetra dia ny fanapaha-kevitra. Ny URL-nao dia tokony ho faran'izay kely sy manoritra. Ataovy ao an-tsaina fa raha toa ka mahatsapa tsara ny URL -nao sy misaina ny sandan'ny orinasa ianao, dia afaka mahita anao haingana kokoa ianao ary afaka mahazo SEO mora.
Mifantoha amin'ny tontolonao
Tsara ny manamarika fa ny ankamaroan'ny asa aman-draharahanao dia mivantana mivantana avy amin'ity pejy ity. Noho izany, tsy maintsy manao izany ianao. Ireo manam-pahaizana SEO dia mamaritra ireo zavatra telo tokony hapetraka ao amin'ity pejy ity mba hahatonga ny orinasanao hijanona amin'ny vahoaka. Ireto misy izy ireo:
Lohateny tsara indrindra
Na dia mety ho hita miharihary aza izany, dia ho gaga ianao hoe firy ny pejy maro tsy manana lohateny, izay diso. Andeha hojerentsika fa orinasa fitantanana trano any Floride ianao, avy eo ny lohatenin'ny SEO-tsara ho an'ny pejy fandrahonana anao dia tokony ho zavatra toy ny Florida Property Management Agency.
Tokony ho afaka hanampy anao haingana ireo mpanjifa anao, mba hahazoana antoka fa ny laharan-telefaona dia hita maso. Aza afenina, fa ataovy eo ambanin'ny lohateninao izany, mba hahafahan'ny olona hifandray aminao ao anatin'ny segondra vitsy.
Zava-dehibe ny hanomezana mpampiasa hafa fomba hafa afa-tsy ny finday ahafahany mampifandray anao. Diniho ny endrika fifandraisana amin'ny saha 4-5. Anontanio ireo mpitsidika fampahalalana fototra, noho izany dia mora ho azy ireo ny manome ny mombamomba azy.
Azonao atao ny manomboka manatsara ny tranonkala fitantanana ny orinasanao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo toro-hevitra telo SEO ireo. Raha vao vita ny miaraka aminao dia afaka mandroso bebe kokoa amin'ny fampidirana ny fijoroana vavolombelona sy fampidirana ny fahafahanao misafidy amin'ny lahatsary manazava.